Incazelo I-fiberglass indaba, lathatha inqubo ukwelukwa ethile eyenziwe Network isakhiwo ezibonakalayo, ukuvikela fiberglass uphinde uthuthukise ukusebenza jikelele, ngokusebenzisa enamathela inqubo ekhethekile yakha izinto geotextile oluyinhlanganisela. I geogrid fiberglass uhlobo olusha geotextile kakhulu athuthukisa komgandayo futhi roadbed. Into wenziwe nokwelukiweyo fiberglass intambo nokwelukiweyo futhi camera. It has amandla okusezingeni eliphezulu eqine, ukunwebeka ongaphakeme, modulus nokunwebeka r esihle ...
I-fiberglass indaba, lathatha inqubo ukwelukwa ethile eyenziwe Network isakhiwo ezibonakalayo, ukuvikela fiberglass uphinde uthuthukise ukusebenza jikelele, ngokusebenzisa enamathela inqubo ekhethekile yakha izinto geotextile oluyinhlanganisela.
I geogrid fiberglass uhlobo olusha geotextile kakhulu athuthukisa komgandayo futhi roadbed. Into wenziwe nokwelukiweyo fiberglass intambo nokwelukiweyo futhi camera. It has amandla okusezingeni eliphezulu eqine, ukunwebeka ongaphakeme, modulus nokunwebeka ukumelana enhle kakhulu high and low lokushisa ukusebenza njll, ngemva ebusweni ukwelashwa enamathela, omuhle kakhulu ukumelana alikhali futhi ukumelana ukuguga, ezisetshenziswa kakhulu asphalt imigwaqo, usimende egandayiwe eziphathekako roadbed isithuthukisi; kokubili indlela okunzima imigwaqo nezimo singasetshenziswa, uma iqhathaniswa naso emgwaqweni yendabuko ungakwazi ukwehlisa izindleko, ukunweba ukuphila, ukuvimbela kuveza umgwaqo imifantu. fiberglass Geogridangasetshenziswa ngoba ujantshi, sezindiza, amanzi Conservancy, idamu nezinye ezithambile inhlabathi isithuthukisi futhi roadbed esinye isithuthukisi.
1) amandla eqine High, ukunwebeka ongaphakeme
2) Akukho ungangena eside
3) nokuqina Thermal
4) Oluvumelana nge asphalt ingxube
5) Physical namakhemikhali ukuzinza
6) Ukuhlanganisa Ukufakwa kanye Okuvumelekile
It kungenziwa kabanzi nokunakekelwa ubudala usimende kwendawo egandaywe ngamatshe, sezindiza evulekile, idamu, Ukuvikelwa yokuma kwayo indawo, emgwaqweni futhi ibhuloho egandayiwe ukuqinisa ukucutshungulwa kanye nezinye izindawo zobunjiniyela.
Ukucaciswa kanye nemingcele
Previous: ngomala geomembrane
Olandelayo: polyester geogrid
Basalt Fibre Ukugxilisa Geogrid
Incwadi uma ikhuluma ngebitume Camera fiberglass Geogrid
incwadi uma ikhuluma ngebitume Camera fiberglass Geogrids
High Quality Yamadivayisi fiberglass Geogrid
Kk fiberglass Polyester Geogrid
Amandla eqine fiberglass Geogrid
Warp wathungela fiberglass Geogrid